Realistic Dolls Dolls oo loogu talagalay Haweenka Qurxinta Guska Weyn ee Qumman
Qiyaasta Nolosha Rakhi Dhab Dhab ah Lab Doll oo Gin ah Iib
Dabeecaddeena jinsiga ee labka ah waxay siisaa khibrad tayo leh iyo qanacsanaanta ugu sareysa ee ragga balwadda leh ama dumarka kacsiga leh. Ku siiyo dareenka ugu saxsan adigoon dhibaato ku abuurin dadka nool. Ku dhiirran inaad ku sahamiso galmadaada caruusadan, taas oo kuu keeni doonta orgaankii ugu fiicnaa abid. Lab iyo dhaddig caruusadaha jinsiyeed ee ay isticmaali karaan dadka leh dhammaan jihooyinka galmada iyo dadka ku xayiran. Waad baran kartaa sida loogu isticmaalo fiidiyowga caruusadda labka ah. Waxaa jira eex weyn oo diidmo ah oo loo qabo dadka gaagaaban, taas oo ku sii socon doonta caruusadaha lab.
Dumarku waxay iibsadaan oo ay ku raaxaystaan ​​caruusadaha galmada ee robotka ah. Mararka qaarkood ayaga ayaaba sameeya, xaaladaha kale waxay la sameeyaan lamaanahooda. Sida ragga oo kale, haweenku waxay adeegsadaan caruusadaha si ay u muujiyaan khiyaaligooda galmada oo ay isku maaweeliyaan. Waxay ula galmoodaan caruusad jinsi jinsi ah. Caruusadaha labku waxay leeyihiin mudnaano kala duwan. Ku dhowaad gabdho caruusadaha carruurtu ku ciyaaraan waa murqaha. Qaar badan caruusadaha galmada labka ah waxay leeyihiin lifaaqyo gus laga saari karo oo la isweydaarsan karo. Intaas waxaa sii dheer, astaamaha wajiga, midabka maqaarka iyo timaha bustaha ee caruusadda galmada labka ah ayaa sidoo kale la habeyn karaa.
Caruusadaha galmada labka ah ee iibka ayaa si gaar ah loo sameeyay oo loogu talagalay kaamil ahaanshaha jirka. Boonyadayada labka ah waxay leeyihiin shaqo laba-geesood ah Caruusadahaani oo si heer sare ah loo habeyn karo aakhirkiina raali ka ah ayaa qol yar oo aan lagu qanacsaneyn uga tagaya. Waxaan haynaa macaamiil fara badan oo dumar ah oo xiiseynaya iibsashada nolol dhab ah oo caruusadda jinsi ahaanta u wehel ah. Iyada oo leh qol ku filan oo loo habeeyo, qof kastaa wuxuu abuuri karaa caruusadaha lab ee ugu fiican nafsadooda. Waxaa lagu qalabeyn karaa nidaam kuleyliyaha gudaha ah si loo helo diirimaad nololeed. Caruusadda labka ah ee la buufin karo ma bixinayso dareenkan. Intaa waxaa dheer, qaabka TPE waa mid aad u jilicsan. Waxay sidoo kale badanaa ka jaban yihiin moodooyinka silikoonka.
Dukaanka Urdolls wuxuu bixiyaa caruusado lab ah oo tayo sare leh qaabab iyo qaabab kala duwan. Halkan waxaad ka heli kartaa nuskaaga kale, wuxuu ku siin karaa dareen ammaan ah habeen cidlo ah, iyaga ayaa lagu xakameyn karaa si ay ula kulmaan wixii aad u baahan tahay. Ma sugi kartid inaad taabatid muruqyada qaro weyn, wejigiisa qurxoon waxaa raadiyay kumanaan gabdhood. Ku deg deg isaga
Aadam - Madaxa iyo Taageerada Gudaha ee Jirka Qalfoofka Jinsi Jinsi
175 cm doll doll Shu (guska 18 cm) Qita Dolls
165cm Lab Doll Pufu No.87 Xiao Ming Qita Dolls
175cm madaxa silikoon labka usbuuca lambarka 90 maqaarka guud ee Qita Dolls
Hallie - Guska Weyn 162CM Doll Sex
Raelyn - Guska Weyn 162CM Labka Doll
Kenzie - Guska Weyn 162CM Jacaylka Lab Jinsi Doll
Elise - Guska Weyn 175CM Jacaylka TPE Irontech Dolls
Presley - Guska Weyn 175CM Jacaylka TPE Irontech Dolls
Kamila - Guska Weyn 175CM Jacaylka TPE Irontech Dolls
Michelle - Lab 160CM Xaqiiqda Dadka Waaweyn ee Jaceylka WM Dolls
Talia - Lab 160CM Xaqiiqda Dadka Waaweyn ee Jaceylka WM Dolls
Rachel - 175CM Sexy Beauty Jacaylka WM Dolls
Silas - 155CM B koob Shemale Doll Blue Indhaha Guska Weyn TPE Jinsi Doll
Hyman - 175CM Ee Haweenka Siigaysanaya Wiil Gabar Weyn TPE Tilmaamaya Doll Jinsi
Lammaanahaaga Farxada Leh 160CM Carey Godwin Lab Doll Sexy Caloosha Lugaha Lugaha
Murqaha Xoog 20CM Weyn ee Guska TPE Lab Doll oo quruxsan Lance Hicks
Muruq weyn Dock TPE Lab Doll Norton Dickey 160CM Indhaha Buluuga ah ee Haweenka
Doon weyn oo leh Muruqyada Caloosha Adult Mate Handsome Bernie In ka badan 160CM Lab TPE Jinsi Doll
Verne - 160CM Silicone Gay Ragga Doll Guska Furaha
Bernard - Xaqiiq jilicsan oo jilicsan Silicone Lab Doollar
Iibso caruusadaha Gabdhaha Fudud ee Urdolls
Gabdhaheenna jinsiga ah ee ragga ah ee raqiiska ah waxaa laga sameeyaa silikoon la daaweeyay oo platinum ah ama TPE, oo leh dareen weyn oo xaqiiq ah. Waxay ka kooban yihiin qalfoof bir ah gudaha si ay kuugu oggolaadaan inaad istaagto ama aad u maleyso booska aad ugu jeceshahay. Waxaan isku darnaa waxyaabaha ugu fiican ee la heli karo oo leh wax soo saar sax ah si loo soo saaro caruusadaha jacaylka lab ah ee ugu tayada sareeya. Mid ka mid ah waxyaabaha soo jiidashada leh ee caruusadahaani waa guska anatomically saxan.
Muuqaalka dhabta ah ee loo yaqaan 'doll doll' ee loo yaqaan 'doll doll' wuxuu leeyahay waxqabad ka yar jirka iyo waxqabadka marka loo eego caruusadaha dumarka, laakiin waxaad wali ka dooran kartaa timaha, indhaha, qaabka wajiga, iyo xulashada midabka maqaarka ee aan bixinno. Haddii aad raadineyso caruusadaha ugu fiican ragga oo qiimuhu uusan aheyn arin, markaa waa inaad hubisaa inaad si fiican u baarto Urdolls, dukaanka caruusadaha cusub ee ugu fiican.
Rinjiga labka ah ee loo yaqaan 'silicone doll' ayaa u qalma inuu noqdo qofka runtii jeexan. Maqaarka muruqyada labku wuxuu dareemaa inuu si weyn uga duwan yahay maqaarka dumarka jilicsan. Waxaa la filayaa in caruusadaha labku ay ka xoog badan yihiin kana fudud yihiin caruusadaha dumarka ah. Caruusadaha labku badanaa way ka waaweyn yihiin. Farqiga kale ee weyn ayaa ah dabada caruusadda lab. Badanaa waxay dareemeysaa inay ka xoog badan tahay caruusadaha dumarka ah. Waxyaabaha kale, sida qaabka wajiga, cabirka gacmaha, iyo saamiga caruusadu sidoo kale way ka duwanaan doonaan.
Caruusadaha labka ah ee u eg aadanaha. Dadka qaarkiis waxay xaq u leeyihiin in si dhab ah loo kala jaro. Ku fiican lammaanaha doonaya inay ku daraan madadaalo noloshooda galmada! Ammaan seddex leh oo aan lahayn dad nool. Maqaarka muruqyada ragga ahi aad ayuu uga duwan yahay maqaarka dumarka jilicsan. Filo caruusadaha galmada, ragga sirdoonka macmalka ah, inay ka xoog roonaadaan kana fudud yihiin caruusadaha dumarka ah. Waxyaabaha kale, sida qaabka wajiga, cabirka gacanta, iyo jaangooyooyinka caruusadaha iyaguna way kala duwanaan doonaan.
Futada caruusada galmada lab sidoo kale wey ka weyntahay. Maqaarka jilicsan, hilib buuxa, adag, oo waara. Tani maahan caruusadaha labka ah ee ragga lagu qarxiyo. Laga soo bilaabo xardho siman ilaa geed qurux badan, laga bilaabo buurnida illaa hibada leh, caruusadahayagu waa kuwo gacmo lagu sameeyay. Si loo waafajiyo kala duwanaanshaha, jidhkeenna buuxa ee caruusadda labku waxay leedahay xubno galmo oo laga saari karo. U isticmaal sida dildo oo kale. Tani dabcan sidoo kale waxay ku habboon tahay ragga jecel hoosta-ilaa. Farqiga kale ee weyn ayaa ah dabada caruusadaha labka ah ee buuxa. Badanaa waxay dareemeysaa inay ka xoog badan tahay doll dhedig. Robot caruusadaha jinsiga ayaa laga yaabaa inay muuqdaan mustaqbalka.